उपेन्द्र यादव पहिलो मधेसी राष्ट्रिय नेता ! – Kavreonline
काठमाडौं। लामो समयसम्म कम्युनिष्ट राजनीति गरेका उपेन्द्र यादव यतिबेला पहिलो मधेसीका रुपमा राष्ट्रिय नेता बन्न सफल भएका छन्। मधेसी जनअधिकार फोरम नामक गैर सरकारी संस्थाको आवरणमा मधेसको राजनीति सुरु गरेका यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी नेपालको यतिबेला ७७ वटै जिल्लामा संगठन छ।
मधेस आनदोलनबाट उदाएका यादवले सुरुमा मधेस केन्द्रित राजनीति गरेका थिए। मधेसी जनअधिकार फोरमको नामबाट राजनीति गरेका यादव यतिबेला पहिलो मधेसी राष्ट्रिय नेता बन्न सफल भएका छन्। पहिलो संविधानसभामा यादव नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरमले ५२ सिटमा जित हासिल गरेको थियो। त्यसपछि फोरममा विजानको शृंखला सुरु भयो।
पहिलो मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरेर एकाएक चर्चामा आएका यादवले एमालेबाट बाहिरिएर ‘संघीय समाजवादी’ गठन गरेका अशोक राईसँग उपेन्द्र यादवले पार्टी एकता गरे।
मधेस केन्द्रित राजनीति गरेका उपेन्द्र यादवले संघीय समाजवादीसँग एकता गरेपछि उनको संगठन पूर्वी पहाडी जिल्लामा पनि विस्तार भयो। अन्य मधेस केन्द्रित दल तराइका २२ जिल्लामा खुम्चिँदा उपेन्द्र यादव पडाहका जिल्लामा गएर भाषण गर्न सक्ने भए।
मधेसी जनअधिकार फोरम नामक गैर सरकारी संस्थाको आवरणमा मधेसको राजनीति सुरु गरेका यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी नेपालको यतिबेला ७७ वटै जिल्लामा संगठन छ
प्रखर र स्पष्ट वक्तामा रुपमा परिचित यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल प्रदेश सभा निर्वाचनमा दुई नम्बर प्रदेशमा पहिलो दल बन्न सफल भयो र अहिले दुई नम्बर प्रदेशमा अहिले फोरम नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ। यता केन्द्र सरकारमा यादव उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी छन्।
त्यसो त नेपालका सबै जसो राजनीतिक दलमा मधेसी नेताहरु सक्रिय छन्। देशको सबैभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेसमा पनि मधेसी नेताले आफ्नो पहिचान बनाएका छन्। कांग्रेसमा महेन्द्रनारायण निधि मधेसी मुलबाट पहिलो महामन्त्री बन्न सफल भएका थिए। अहिले पनि कांग्रेसमा महेन्द्रनारायण निधिका छोर विमलेन्द्र निधि उपसभापति छन्। त्यसपछि डा. रामबरण यादव कांग्रेसको महामन्त्री बन्न सफल भए। महन्थ ठाकुर पनि कांग्रेसमा कोषाध्यक्षसम्म बनेका थिए। रामवरण यादव त पछि देशकै पहिलो राष्ट्रपति बन्न पनि सफल भए।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वमा भएको पहिलो मधेस आन्दोलन सफल भएपछि राष्ट्रिय दलबाट राजीनामा दिएर मधेस केन्द्रित राजनीति गर्न क्षेत्रीय पार्टी गठन गर्ने होड नै चल्यो। कांग्रेसबाट महन्थ ठाकुर, जेपी गुप्ता, विजयकुमार गच्छदारलगायतका नेताहरुले राजीनामा दिए। ठाकुरले तराइ मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) गठन गरेभने गच्छदार र गुप्ता यादव नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरममा आवद्ध भए। तर बीचमा उनीहरुले पार्टी विभाजन गरे। तर यादव अनवतर रुपमा त्यही पार्टीमा सक्रिय भए र आज पहिलो मधेसी राष्ट्रिय नेता बन्न सफल भएका छन्।
तर राष्ट्रिय पार्टीका रुपमा भने उपेन्द्र यादव नै पहिलो मधेसी राष्ट्रिय नेता बन्न सफल भएका छन्। सोमबार यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकता भएपछि उपेन्द्र यादव पहिलो मधेसी राष्ट्रिय नेता बन्न सफल भएका छन्।
आज डिभी चिट्ठा नतिजा सार्वजनिक हुने, यसरी हेर्नुहोस्
स्त्रीहरु सधै भगवानको पुजाआराधना किन गर्ने गर्छन ? यस्तो छ भित्रि रहस्य थाहा पाउनु होस ।